Uyifaka njani iividiyo zeNvidia kwi-Ubuntu 18.04? | Ubunlog
Ukuba kunjalo banekhadi levidiyo kwiikhompyuter zabo okanye nokuba ibhodi yakho yomama iyabala kunye ne-chip yeNvidia yevidiyo edibeneyo, baya kuyazi loo nto ufuna ukusebenza kakuhle kunye nomgangatho wemizobo ongcono Kuya kufuneka ufake abaqhubi bekhadi lakho.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukwenza le nkqubo bekusoloko kunzima, kodwa namhlanje sinezinto ezimbalwa esinokuthi sizenze ukuze sikwazi ukufumana abaqhubi be chipset yevidiyo yethu kwinkqubo yethu ngaphandle kweengxaki ezininzi.
Eli nqaku ligxile ikakhulu kwi-newbies kunye nabaqalayo benkqubo.a, kuba oku kuhlala kungomnye wezihloko obambe ekuqaleni xa uqala ukuqwalasela inkqubo yakho.
Ngaphambi kokuba uqale ngokufakwa kwabaqhubi ngayo nayiphi na indlela endiza kwabelana ngayo nawe Kuyimfuneko ukuba siyazi ukuba yeyiphi imodeli yekhadi levidiyo okanye i-chipset esinayo, oku ukuze sazi ukuba siza kukhuphela kwaye sifake ntoni.
Ke ukwazi olu lwazi luncinci xa ungalwazi Kuya kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo mthetho ulandelayo:
Yeyiphi uya kuphendula ngolwazi lwemodeli yekhadi lethuNgolu lwazi, siyaqhubeka nokukhuphela umqhubi.
1 Kufakwe abaqhubi beNvidia kwiindawo zokugcina ezisemthethweni Ubuntu
2 Kufakwe abaqhubi beNvidia abavela kwiPPA
3 Kufakwe abaqhubi beNvidia kwiwebhusayithi esemthethweni
Kufakwe abaqhubi beNvidia kwiindawo zokugcina ezisemthethweni Ubuntu
Ngoku Singawenza omnye umthetho oya kuthi usixelele ukuba yeyiphi imodeli kunye nomqhubi wevidiyo okhoyo ngamajelo asemthethweni Ubuntu.
Solo kufuneka sichwetheze kwisiphelo sendlela:
Ngento ekufuneka ivele into efana nale, kwimeko yam:
Esifumana ngayo owona mqhubi wangoku esinokufaka kuye Ukusuka koovimba abagcina Ubuntu.
Singafumana ufakelo olulula ngeendlela ezimbini, eyokuqala kukuba le nkqubo inye iyayikhathalela, ke kwisiphelo esenzayo:
Ngoku ukuba sifuna ukubonisa uhlobo oluthile olufunyenwe ngaphakathi koovimba, sichwetheza nje, sithatha njengomzekelo wento endiyibonisiweyo zizixhobo eziqhuba ubuntu-zabaqhubi.
Kufakwe abaqhubi beNvidia abavela kwiPPA
Enye indlela kufuneka sifumane abaqhubi bevidiyo chipset yethu Kukusebenzisa indawo yokugcina umntu wesithathu.
Nangona ingelilo ijelo elisemthethweni, Le ndawo ineenguqulelo zomqhubi weNvidia ngokukhawuleza, kunjalo kunokuba yinto elungileyo ukuba ufuna ukuba nezinto zamva nje ngokukhawuleza.
Ukongeza indawo yokugcina kwinkqubo yethu Kufuneka sichwetheze kwisiphelo sendlela:
Kwaye ukwazi ukuba loluphi uhlobo lwangoku oluhambelana ne-chipset yethu, sichwetheza kwakhona:
Apho iyakusixelela ukuba loluphi uhlobo ekufuneka silufakile, esenza ngalo:
Apho uthatha indawo ye-xx ngohlobo endilubonisayo.
Kufakwe abaqhubi beNvidia kwiwebhusayithi esemthethweni
Gqibela ukhetho lokugqibela kufuneka sifake abaqhubi bevidiyo yeNvidia kwiikhompyuter zethu kukukhuphela ngokuthe ngqo ukusuka kwiwebhusayithi esemthethweni yeNvidia.
Apho ku kufuneka siye kule khonkco ilandelayo kwaye kufuneka sibeke idatha yemodeli yethu Imizobo khadi ukusinika owona mqhubi uhambelanayo ngoku.
Emva kokukhuphela, Singaqhubeka nokufaka kwinkqubo. Ngenxa yoku kufuneka unzip ifayile kwaye uvule i-terminal Ukuzibeka kwifolda apho ifayile ebingavulwanga sayifaka kunye nomyalelo olandelayo:
Inguqulelo yomqhubi inokwahluka ngokuxhomekeke kwimodeli yekhadi lakho. Kufuneka ulinde ukufakela ukugqiba kunye nokuqalisa kwakhona ikhompyuter yakho ukuze useto lugcinwe.
Ngale nto baya kuba nakho ukufumana isixhobo sokumisela iNvdia kwiisistim zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Imizobo » Uyifaka njani iNvidia yevidiyo kwi-Ubuntu 18.04?
UMarco Tulio VS sitsho
Mva kwemini, ndiyintsha kuLinux; Ndiyabulela ukuba wabelana ngolwazi lwakho; kodwa xa ubhala kwisiphelo sendlela: izixhobo eziqhuba ubuntu; akukho nto ibonakala kum. Ndiya kuluvuyela uluvo okanye uncedo. Ndine-xubuntu 18.04, 32 bit kunye nekhadi le-NVIDIA Corporation C61 [GeForce 6100 nForce 405] (rev a2).
Phendula uMarco Tulio VS
ULuis Miguel sitsho
UDavid, emva kwemini kwaye ndivumele ndikubhalele.
Ndinengxaki kwi-UBUNTU 18.04.1, ngaphandle kokukwazi ukuyisombulula kude kube ngoku. Umbuzo kukuba ndiyifakile i-UBUNTU kunye Windows 10 kwaye i-boot ezimbini zavela ngesiqhelo, kodwa xa ndizama ukuqala Ubuntu emva kokucela iphasiwedi, ikhompyuter iya kujinga. Kodwa le yimbali, kuba enkosi kuwe isonjululwe kwaye isebenza njengekhubalo kum.
Nantsi into endiyenzileyo:
Kwisiphelo sendlela endibeke kuyo: izixhobo zokuqhuba ubuntu
Kwaye emva koko ndifumene olu lwazi lulandelayo:
umthengisi: INVIDIA Corporation
Umzekelo: GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile]
Umqhubi: i-nvidia-driver-390-distro engekho simahla ekucetyiswa
umqhubi: xserver-xorg-ividiyo-entsha-distro yasimahla eyakhiweyo
Ukulandela imiyalelo yakho ndibeke kwisiphelo sendlela:
I-sudo ubuntu-driver autoinstall.
Kwaye emva kwemizuzwana embalwa, yonke into ilungisiwe.
Enkosi kaliwaka nangaphezulu.
Phendula uLuis Miguel
UJonathan Suarez sitsho
Yintoni enye umhlobo andikwazi ukufaka iidrive okanye i-vlc kwimiboniso bhanyabhanya endiyikhuphele kwenye ikhompyuter kodwa ayisebenzi ndiyenza kwenye ipc kodwa ayifanelekanga ukuba ndingayenza njani
Phendula ujonathan suárez
Isifundo esihle kakhulu, enkosi.
Umqhubi we-nvidia 390 ophetheyo .. akavumeli ukungena kwi-OS kwaye awukwazi ukungena kubuntu 19.10. Ihlala inika iingxaki kodwa ngoku inkulu ngakumbi, yenza iluphu ngaphandle kokuba ukwazi ukuphuma ngaphandle kwekhonsoli. Ngaba uyazi ukuba ungayisombulula njani? Ubuntu 19.10 Inkqubo ye-64-bit yokusebenza.
Molo intsasa emnandi. Ukufakwa komqhubi njengoko wenzile, i-PPA, ukhuphele ezisebenzisekayo kwiwebhusayithi yeNvidia okanye kukhetho olongezelelweyo lokuqhuba.
Ngaba iluphu okhankanya i "Blackscreen" edumileyo, oko kukuthi, isikrini esimnyama?
Ndisebenzisa uhlobo olufanayo "390.129" kwaye ndikwe-19.10, ke nditsho ukuba yingxaki kwinkqubo.
UCarlos David sitsho
Molo, ngoku ndiqhuba i-sudo ubuntu-drivers autoinstall emva kokuqhuba "izixhobo zokuqhuba ubuntu", kwaye abaqhubi bayafakwa. NdineKhadi levidiyo leGeForce RTX 2070, ucinga ukuba iyasebenza?
Phendula uCarlos David
UJohn J Garcia O sitsho
Xa ufaka abaqhubi uNvidia akandivumeli iimpazamo ezininzi ezinokuboniswa ngezikrini. Yeyiphi i-pc ebonakala isebenza kwi-X kwaye kufuneka ndiphume ukufaka i-Nvidia Driver kwaye khange ndikwazi ukuphuma X andinawo amanyathelo okukwenza kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Phendula kuJohn J Garcia O
UJose felix sitsho
Uluhlu lokufunda kwephakheji ... lwenziwe
Ukwenza umthi wokuxhomekeka
Ukufunda ulwazi ngobume ... Kwenziwe
Awunakho ukufaka ipakethi ethile. Oku kunokuthetha ukuba
Ucele imeko engenakwenzeka okanye, ukuba usebenzisa unikezelo
ayizinzanga, yokuba ezinye iipakeji azikenziwanga okanye zikho
Olu lwazi lulandelayo lunokunceda ukusombulula le meko:
Ezi phakheji zilandelayo zinokuxhomekeka okungagungqiyo:
nvidia-304: Kuxhomekeka: xorg-ividiyo-abi-11 kodwa ayifakwanga okanye
xorg-video-abi-12 kodwa ayinakufakelwa okanye
xorg-video-abi-13 kodwa ayinakufakelwa okanye
xorg-video-abi-14 kodwa ayinakufakelwa okanye
xorg-video-abi-15 kodwa ayinakufakelwa okanye
xorg-video-abi-18 kodwa ayinakufakelwa okanye
xorg-video-abi-19 kodwa ayinakufakelwa okanye
xorg-video-abi-20 kodwa ayinakufakelwa okanye
E: Iingxaki azinakulungiswa, ugcine iipakeji ezaphukileyo.
Phendula ujose felix
Ndifakelwe kwiPC yam Windows 7 Windows 10 kunye neLinux Ubuntu 20.04, bendinesidingo sokufaka ikhadi leVidiyo iNVIDIA GeForce 7100 GS. Kuzo zombini iWindows 7 kunye Windows 10 Ndikwazile ukuvuselela abaqhubi ngaphandle kweengxaki, kodwa xa ndingena kwiLinux ndifumana kuphela imivimbo ukusuka phezulu kuye ezantsi kwaye ANDIBONI NANTSI, andinakwenza nto. YENZWA NJANI KULA MAZEKO?
Ndiyabulela kakhulu ukuba iluncedo kakhulu! Enkosi ngomsebenzi obalaseleyo owenzayo! Zininzi Iintsikelelo!
USandy Alvarez Pardo sitsho
Molo bendifuna ukubuza umbuzo omncinci, ndinelaptop, i-HP, iCore i510 enekhadi lemizobo elihlanganisiweyo iNvidia GTX 1050. Kuyavela ukuba ndiyayifaka iLinux, nayiphi na into eyahlukileyo yeDebian okanye Ubuntu kwaye xa ndifaka abaqhubi beNvidia kuyenzeka ukuba Iscreen esidityanisiweyo sishiywe ngaphandle komqondiso, kusebenza kuphela izibuko le-HDMI. Naluphina uluvo lokuba ungayilungisa njani. Ukubulisa.
Phendula uSandy Alvarez Pardo
3 graphic Git abaxhasi Ubuntu 18.04